दल–दलका दैलामा बारको घरदैलोः आफ्नै खरानी उडाएर हस्तक्षेपलाई निम्तो | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
दल–दलका दैलामा बारको घरदैलोः आफ्नै खरानी उडाएर हस्तक्षेपलाई निम्तो
अहिले त केवल दनदनी आगो बलिरहेको छ । दमकल लगेर निभाउन कोही तयार छैन । बरु पेट्रोल छकिर्ने अनौठो प्रतिस्पर्धा छ ।
२०७८ मंसिर ७, मंगलवार १८:४३:००
काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले घोषितरुपमा र केही अदालतभित्रकै तत्त्वहरु अदृश्यरुपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरुलाई उक्साइरहेका छन् । बारले त लिखितरुपमै संसदमा उजुरी गरी अदालतमा राजनीतिक हस्तेक्षपका लागि सबैले देख्ने गरी निम्तो बाँडेको छ ।
त्यस्तै पूर्वन्यायाधीशहरुको समूहले पनि राणामाथि महाभियोग लगाउन दबाब बढाइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरुले झन् ठूलो गुटबन्दी गरी प्रधानन्यायाधीश राणालाई पदमा टिक्न नदिने रणनीति बनाएका छन् ।
अहिले एक जना राणालाई हटाउन यी सबैको मुख मिलेको छ । राणाका विरुद्ध चर्काभन्दा चर्का भाषण गर्न र आरोप तथा लाञ्छनाहरु लगाउन प्रतिस्पर्धा चलेको छ । जति चर्को र सस्तो बोल्यो, उति नै लोकप्रिय र क्रान्तिकारी देखिइन्छ भन्ने भ्रम सबैमा उत्तिकै छाएको छ ।
बारले महाभियोगका लागि दलदलको घरदैलो चहार्नु न्यायिक इतिहासकै एक कालो अध्याय हो भन्दा फरक पर्दैन । न्यायालयमा हस्तक्षेपका निम्ति खुला निम्तो र पैरवी गर्न कुनै पनि लोकतान्त्रिक शक्ति र सोच भएको संस्थाले गर्न सक्दैन । न्यायालयभित्रका समस्या केही छन् भने भित्रै समाधान गर्ने हो । संयमित तवरमा संवादका माध्यमबाट निकास खोज्नुपर्ने हो । तर, यहाँ ठीक उल्टो भइरहेको छ ।
जतिसुकै खराब अवस्था आए पनि न्यायालय क्रान्ति गर्ने ठाउँ होइन । निकै संवेदनशीलताका साथ विषयवस्तुको अवतरण गराउनु र सुझबुझ प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो । न्यायालयलाई कमभन्दा कम क्षति हुने गरी निकासका लागि प्रयासरत रहनुपर्ने हो । यी कुनै पनि उपायमा नलागी आफ्नै जिउ कन्याएर खरानी उडाउने र अर्को क्षेत्रबाट हस्तक्षेप निम्त्याउने काम अहिले न्यायालयभित्रैबाट भइरहेको छ । यो निकै घातक छ र यसले एकाध राणाको मात्र सिकार गर्ने छैन, काल पल्क्याएर धेरै ठूलो क्षति निम्त्याउनेछ ।
यसो भन्नुको अर्थ न्यायालयका विकृति, विसंगति र बेथितिलाई कार्पेटमुनि लुकाएर राख्नुपर्छ भन्ने होइन । नियमित सरसफाइ र शुद्धीकरणका प्रयास हुनैपर्छ । र, यी सबै प्रयास थिति बसाल्ने सर्तमा हुनुपर्छ । न्यायालयको स्वतन्त्रता र सक्षमता अभिवृद्धिको गुरुत्तर भावनाबाट प्रेरित हुनुपर्छ । अनि खराबीलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य निहित हुनुपर्छ ।
जब असल नाराको आवरणमा भित्रभित्र षड्यन्त्रहरु रचिन्छन्, नयाँनयाँ संस्करणका कोतपर्व रिहर्सल गरिन्छन्, त्यसपछि अनाहकमा अन्धाधुन्ध तरबारहरु चल्छन् । नारा सुधारको, निहित उद्देश्य अर्कै हुन थाल्छ । अहिले अदालतमा तख्तापलट गर्न चाहनेहरुले जतिसुकै राम्रा सुधारका नारा दिए पनि अन्त्र्यमा न्यायालय कब्जा नै देखिन्छ । आफ्नो इशारामा नाच्ने अदालत सबैलाई चाहिएको छ । ती ‘सबै’हरुका बीच जुन दिन टकराव चल्नेछ, यो संस्थाको खरानी पनि नभेटिने गरी समाप्त पारिनेछ ।
अहिले त केवल दनदनी आगो बलिरहेको छ । दमकल लगेर निभाउन कोही तयार छैन । बरु पेट्रोल छकिर्ने अनौठो प्रतिस्पर्धा छ । राजनीतिक तप्काबाट महाभियोगको राँको आएपछि त्यसका लप्काले सर्वोच्चमा रहेका सबै न्यायाधीशलाई एक हस्को बनाउन पनि सक्नेछ । कम्तीमा यत्ति कुरा मात्र बुझ्ने हो भने पनि न्यायालयको अहिलेको समस्याको आधा समाधान त्यसै हुनेछ ।
अहिले एकजना प्रधानन्यायाधीश राणामाथि महाभियोग लगाउने कि नलगाउने भन्ने मुख्य सवाल हुँदै होइन । राणाका नाममा अदालतमा हस्तक्षेप निम्त्याएर आगामी दिनमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुमाथि भयको तरबार झुन्ड्याइरहने, भय देखाएर आफ्नो स्वार्थमा दोहन गरिरहने खतरनाक दाउ आन्दोलनकारीहरुमा देखिन्छ ।
राणालाई तर्साउन अहिले एकातिर महाभियोगका लागि हारगुहार र घरदैलो हुँदै छ । अर्कोतिर, देशभरिबाट उजुरी आह्वान गरिँदै छ । हातमा प्रमाण छ भनेर तर्साउने शम्भु थापाहरु किन ती प्रमाण देखाउँदैनन् ? किन देशभरिबाट आह्वान गरी बल्ल प्रमाण संकलन गर्न खोज्दै छन् । पहिला आरोप लगाउने, पदबाट हटाइहाल्ने अनि प्रमाण संकलन गर्न हिँड्ने ? यो कस्तो न्याय हो ? कस्तो विधि हो ? यसैबाट बुझिँदैन र राणासँग राजीनामा माग्नुको अन्त्र्य ? बगलीमा छुरी छ भने मुखले जपेको रामराम कतिन्जेल टिक्छ र ?